साच्चिकै नेकपा फुट्नै लागेको हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले बल्ल गरे यस्तो खुलासा – नेपाली सूर्य
साच्चिकै नेकपा फुट्नै लागेको हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले बल्ल गरे यस्तो खुलासा
November 2, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on साच्चिकै नेकपा फुट्नै लागेको हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले बल्ल गरे यस्तो खुलासा
सामाजिक सञ्जालमा कमै राजनीतिक विषय उठाउने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले आइतबार फेसबुक स्टाटस लेखे, ‘यतिबेला पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ।’ पार्टी एकतापछिका उपल्ला कचपचमा मध्यस्थता गराउन अग्रसर हुँदै आएका महासचिव पौडेलले सँगसँगै यो पनि लेखेका छन्, ‘नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन सक्तैन।’
दुई अध्यक्षबीच भइरहने झगडाका कारण के नेकपा फुटको संघारमा पुगेकै हो त ? त्यो परिस्थितिलाई महासचिवको फेसबुक स्टाटसले मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको भनाइले पनि संकेत गरेको छ। बैठकको माग राख्दै शनिबार भेट्न पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष एवं प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिदिएछन्, ‘यही अवस्थामा रहनुभन्दा सल्लाहमै अलग–अलग पार्टी चलाएर जाऔं।
सल्लाहले नै फुटाऔं।’ दाहालले आफ्नो निवासमा समर्थक नेताहरूलाई बोलाएर आइतबार यसबारे जानकारी दिएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्षले नेकपालाई एकताको साढे दुई वर्षमै विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको हो।
‘पार्टी नेताहरूले बैठक राख्न माग गरिरहनुभएको छ। प्रचण्ड कमरेडले प्रधामन्त्रीसँग समसामयिक विवादास्पद विषयमा कुरा प्रस्ट पार्न सचिवालय बैठक बोलाऔं भन्नुभएछ’, खुमलटारमा दाहालले गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्दिनँ भन्नुभएछ। केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति वा सचिवालय जुनसुकै बैठक राखेर कुनै निर्णय गरे पनि म मान्दिनँ भन्नुभएछ।
बरु तपाईंहरूले बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो भने त्यसविरुद्ध एक्सनमा जान्छु भन्नुभएछ। अब यही तरिकाबाट पार्टी कसरी अगाडि जान सक्छ रु यही अवस्थामा रहनुभन्दा सल्लाहमै अलग–अलग पार्टी चलाएर जाऔं। सल्लाहले नै फुटाऔं भन्नुभएछ।’
अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने दुई अध्यक्षको छलफल सकारात्मक हुनेभन्दा आआफ्नो पोजिसन देखाउने अर्थमा मात्र देखिएपछि पार्टी विभाजनको प्रसंग छलफलमा आएको बताए। ‘यस्तो चेतावनी वैशाखमा पनि आएको थियो, फेरि आएको छ’, ती नेताले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कहिल्यै सहयोग नगरेको, सुरुदेखि नै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘तपाईंलाई पार्टी र मलाई सरकार चलाउन दिने गरी निर्णय भएको हो।
तर, सरकारका काममा स्वतन्त्र ढंगले मलाई कहिल्यै काम गर्न दिनुभएन। कहिले के भएन, कहिले के चाहियो भन्ने मात्र तपाईंको देखियो। यसले किचलो मात्रै जन्मायो। यही कचिंगल मात्र गरिरहने हो भने किन एकै ठाउँमा बस्ने रु आआफ्नो बाटो लागौं, सल्लाहमै लागौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न खोज्नुभएको हो। तर, यो पार्टी नै अलग गरौं भन्ने अर्थमा होइन’, ओलीनिकट एक नेताले भने।
दुई अध्यक्षबीच किचलो झन् बढेपछि महासचिव पौडेलले फेसबुकमा एकता बचावटको आह्वान गरेका हुन्। उनले अन्तरविरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिसाथ समाधान खोज्न र एकता रक्षा एवं विकासका लागि सकारात्मक योगदान गर्न समस्त नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई आग्रह गरेका छन्। ‘राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने उद्देश्यसाथ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठन भएको थियो।
पार्टी एकता सम्पन्न भएसँगै हामीसामु दुई वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सुदृढ एकतासाथ अघि बढ्ने जिम्मेवारी उपस्थित थियो,’ महासचिव पौडेलले भनेका छन्, ‘तर, आजसम्म आइपुग्दा पनि एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ।’
‘महासचिव कमरेड र मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर कर्णालीको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन रोक्न आग्रह गर्‍यौं। यसले विवाद झन् बढाउँछ। समझदारीबाटै काम गरौं भन्ने आग्रह गरेका थियौं’, नेम्बाङले भने। अन्ततस् दाहालले केही दिनलाई पुनर्गठन रोक्न मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरेको स्रोतले बताएको छ। ‘कर्णालीमा ठीक छ तपाईंहरू आफ्नो कदम चाल्नुहोस्, त्यसपछि म तपाईंहरूले नसोचेको कदम चालिदिन्छु भनेर फोनबाट प्रधानमन्त्रीले भनेपछि प्रचण्डले तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
दाहाल निवास खुमलटारमा सचिवालय सदस्यको छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री थापासँग भने प्रधानमन्त्री ओलीले अलग्गै छलफल गरेका छन्। खुमलटार पुगेर थापाले पार्टी बैठकबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ। ‘स्थायी समितिको निर्णय लागू गरौं। प्रधानमन्त्रीले बिगार्नुभएकै हो। तर, मन्त्रिमण्डल विस्तार ३ जनाको मात्रै अहिले भएको छ।
नयाँ ढंगबाट पुनर्गठन गर्नुपर्छ। नियुक्तिमा राजदूत तीन जनाको मात्र भएको छ अरू बाँकी नै छ। संवैधानिक निकायको नियुक्ति बाँकी छ। त्यसकारण यताबाट पनि ठोस प्रस्ताव लैजानुपर्‍यो। स्थायी समितिले पनि ठोस प्रस्ताव सचिवालयमा दुई अध्यक्षले लाने भन्ने हो’, थापाले खुमलटार बैठकमा भनेका थिए।
के गर्न खोजिएको हो भनेर सोधेको हुँः प्रधानमन्त्री
‘उहाँहरूका एक खालका मिटिङ लगातार चलिरहेका हुनाले यो के गर्न खोजिएको हो, के भइरहेको छ भनेर मैले सोधेको थिएँ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उहाँले छलफल भएको थियो, त्यस्तो केही होइन भन्नुभयो।’ रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा लेखेका छन् ।
August 29, 2020 Nepali Surya